सुनकोशी गाउँपालीका प्रमूख राईको ७ वर्षे कोरिया भोगाई :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
सुनकोशी गाउँपालीका प्रमूख राईको ७ वर्षे कोरिया भोगाई
मेजरकुमार राई (मिजास) उदयपुरको सुनकोशी गाँउपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारी गरी फर्केका राई स्थानीय तह चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो ।
साविकको बाँसबोटे गाविसमा २०३९ सालमा जन्मिएका राईले एसएलसीसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा ज्यामीदेखि फर्निचर उद्योगमा काम गरेका राईले तत्कालिन शाही नेपाली सेनामा पनि जागिर खानुभयो । सेनाको जागिर छाडेर उहाँ माओवादी पार्टीसँग जोडिनुभएको हो ।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि राई पार्टीकै भातृ संगठन किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको काठमाडौं उपत्यकाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो । राजनीतिमा सक्रिय हुँदा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन थालेपछि राई २०६५ सालमा कोरिया पुग्नुभयो ।
कोरियाबाट २०७३ चैतमा नेपाल फर्केपछि गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित राईसित विदेशमा काम गर्दाको अनुभव तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्नका गाउँपालिकाले गरिरहेको कामबारेको कुराकानी ।
कोरिया कसरी पुग्नुभयो ?
इपिएसमार्फत पहिलो लटमा हामी ५० जना कोरिया गएका थियौं । सन् २००८ को कुरा हो यो । विश्वभाषा क्याम्पसमा कोरियन भाषा सिकेको थिएँ । त्यसबेला पहिलो संविधानसभाको चुनाव भइसकेको थियो ।
राजनीति गर्ने मान्छे रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने कारण के थियो ?
व्यवहारमा परेपछि आर्थिक अभाव भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले म विदेश गएको हुँ । चोरेर अभाव टार्ने कुरा भएन । अर्को कुरा नेपालमा रोजगारी पाइएन । कोरियामा झण्डै ७ वर्ष बिताएँ । त्यहाँ धेरै कुरा देख्न पाइयो ।
कोरिया र नेपालबिच दाँज्ने हो भने आकाशपतालको फरक छ । कुनैबेला नेपालले दक्षिण कोरियालाई चामल दिएर सहयोग गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला २५ लाख बढी मानिस मरेको देश गृहयुद्धमा फसेर जर्जर भएको थियो । अहिले त्यहाँ सारा कुरा छ ।
विकासको त कुरै नगरौं । कोरियामा कानुन सबैका लागि हो भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सकिन्छ । जीउधनको ग्यारेन्टी छ । महिलाहरु रातको २/३ बजे एक्लै हिँड्न सक्छन् । दिनरात विकास भइरहेको छ ।
त्यहाँको विकास आरिसलाग्दो छ । पूर्वाधार विकास सँगै विज्ञान प्रविधिमा उनीहरु अगाडि छन् । यता नेपालमा खेतबारी बाँझै छ । त्यहाँ प्रत्येक मानिसको उद्योग छ ।
कोरियामा नेपालीलाई गर्ने व्यवहार समान छ ?
नेपालीलाई नेपालमै गर्ने व्यवहार त फरक छ भने विदेशमा समान हुने कुरै भएन । जब हामी नेपाली भूमी छाड्छौं, त्यहीँबाट हामीले आत्मासम्मान गुमाउन थाल्छौं ।
विदेश जानु भनेको गन्तव्य देशको कानुनलाई स्विकारेर उसको कामको अधिनमा रहनु हो । कम्पनीको स्टाफ असल छन भने राम्रो हुन्छ । खराब स्टाफ छन् भने व्यवहार राम्रो हुँदैन ।
धेरै नेपाली विज्ञान प्रविधिमा पछि छन् । नेपालीको हात चल्दैन । मुख मात्र चल्ने हो । कोरियनले हात समातेर यो स्विच थिच त्यो थिच भन्थे । त्यहाँ गएर हामीले क ख नै सिकेको झैं हुन्थ्यो ।
नेपालीले कोरियामा सिकेको एउटा सिप भनेको चेतना हो । कोरियनले हामीलाई जंगली देख्थे, हामी कोरियनलाई । उनीहरु विज्ञान प्रविधिमा अगाडि छन्, हामी व्यवहारमा । सुरुसुरुमा धेरै गाह्रो भयो । कतिपय ठाउँमा नेपाली र कोरियनबिच झगडा नै हुन्थ्यो ।
त्यहाँ सिकेका सीप जनप्रतिनिधिका रुपमा कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशको विकास जमिनमा नै सुतेको छ । हुदाँहुँदा राम्रो कामको विरोध पनि हुन थालेको छ । सपना देख्ने मानिसको सपनालाई हत्या गरिन्छ । बनाउन भन्दा बिगार्न माहिर भइसकेका छौं हामी ।
कोरिया र नेपालको योजना तथा काम गराईमा फरक छ । पूर्वाधार विकासका लागि योजना र नीति बनाएर लाग्नेछौं ।
एउटा व्यक्ति अमेरिकी ग्रिनकार्डका लागि नेपाली नागरिकता त्याग्छ । क्यानडाको पिआर लिन नेपालका सबै कुरा त्याग्छ । उसलाई त्यहाँको प्रविधि र विकासले तानेको हो । अवसरको लागि मानिस शरणार्थी हुन तयार भए । फिरन्ते हुन तयार भए । आखिरमा ऊ जति धनाढ्य भएपनि आत्मासम्मान पाउँदैन ।
देश विकास गर्न कोही तयार भएनन् । मेरै हकमा पनि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको जागिर छोडेर नेपाल फर्किएँ । मलाई पागलको संज्ञा दिइयो ।
सपना देख्ने मानिस पागल नै हुन्छ । हामी युवा राजनीतिमा नलाग्ने हो भने देश विकास हुन सक्दैन भनेर नेपाल फर्किएँ । मलाई कोरियामा दिएको सारा सुविधा फिक्का भयो ।
नेपाल आएर राजनीतिमा होमिएँ । सानो उमेरमा नै देश विकासमा लाग्ने योजना बनाएँ । विशेष गरेर सुनकोशी गाउँपालिकाबाट नजिक पर्ने हलेसी महादेवको मन्दिर जानका लागि गाईघाट हलेसी सडकबाटो निमाण गर्ने र सुनकोशीमा पक्कि पुल हाल्ने ।
त्यसका लागि हलेसी नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाको सहकार्य भईसकेको छ । गाउँसभावाट पास गरेर यो योजना हामी सबैले साझा मुद्दा बनाएका छौ । बिजुली पुर्‍याउन दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं । सडक निर्माण र मर्मतका लागि एक करोड विनियोजन गरेका छौं ।
गाउँपालिकाबाट विदेश जाने युवाको संख्या बढिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिन्न, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेश जाने क्रम चलेको जति भयो, त्यती नै समय रोक्नका लागि चाहिन्छ ।
मैले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गरेको हो । ठग्ने भन्ने कुरा विदेशमा हुँदैन । अरुको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ । देश र परिवार छोडेर विदेश जानु भनेको सानो पीडा हैन ।
नेपाली कामदार लगेर अरु देशले विकास गर्छन् । रोजगारीमा गएका कतिपय युवा सकुशल फर्कन्नन् । परिवारको एक्लो छोरो पनि बाकसमा आउनु परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा परिवारको अवस्था के होला, यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
विदेश जानु राम्रो होइन । वैदेशिक रोजगारीलाई मैले नजिकवाट नियालेको छु । गाउँमै सीप सिकाउन उद्यमशिलताका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । युवाका लागि चाँडै नै सीप विकासका लागि तालिम सुरु गर्नेछौं ।
कृषिमा केही काम गर्न सकिएला कि ?
प्रधानमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही कार्यक्रम आएका छन् । लेक, बेंसी भएका कारण आलु, फापरदेखि सुन्तला र धान फल्ने भूभाग छन् । त्यसै अनुसार कृषिमा पनि जोड दिइनेछ ।
गाउँ बनाउनु पर्छ भनेर छटपटिएका युवाले साथ दिएर विकास निर्माणका लागि मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ । त्यो जनमतलाई कदर गर्नुछ ।
गाईघाट हलेसी सडक जोड्ने, आधुनिक कृषि र पर्यटनमा पनि जोड दिन्छौं । विकासका लागि कसैको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने अवस्था छैन । हामीसँग प्रशस्त बजेट छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच महिना बित्यो । चुनौती के के रहेछन् ।
चुनौती त छ । भौतिक संरचना छैन । भवन बनाउनका लागि बजेट छैन । इन्जिनियरहरु छैनन् । कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी गाउँ जान नमान्ने । गएपनि नबस्ने । नागरिकलाई सेवा दिन नमान्ने । धेरैजसो कर्मचारी काम गर्न आनाकानी गर्छन् ।
यी चुनौतीका बिच योजना कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
मानिसले देखेको सबै सपना पूरा हुँदैनन् । छातीमा हात राखेर ५ वर्ष दिलोज्यान दिएर विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नेछु ।